Show All Most Popular Cutlery YKKO Cook @Home Menu Frozen Product Kyay Oh Mini Kyay Oh (Meat Ball) Tom Yum Kyay Oh Mala Kyay Oh Shue Shae Si Chet Chinese Cuisine Chinese Meal Box Satay Grills Wonton Combo Set Soup Juice
YKKO Cook @Home Menu
Mini Kyay Oh (Meat Ball)
No.(24/26), Ground Floor, South Race Course Street, (Race Course Condo), Yangon, MM Tamwe
No.(24/26), Ground Floor, South Race Course Street, (Race Course Condo), Yangon, MM Tamwe Founded in 1988, With 37 branches now all over Myanmar. YKKO's goal is to deliver more of quality Kyay-Oh and to share their food with everyone in Myanmar. Inspired by the simplicity of the dish, we began making Kyay-Oh in Yankin suburb, where the first restaurant, Yankin Kyay-Oh was opened. Later, when we openedasecond shop on Saya San road, we abbreviated the original name to YKKO. Since then, YKKO has sought to accentuate the Kyay-Oh dining experience by placing emphasis on convenience, clean and tasty noodles.
Sunday10 AM - 17:30
Monday10 AM - 17:30
Tuesday10 AM - 17:30
Wednesday10 AM - 17:30
Thursday10 AM - 17:30
Friday10 AM - 17:30
Saturday10 AM - 17:30
Kyay Oh Si Chat (Regular) (ကြေးအိုးဆီချက်ပွဲကြီး) (ကွေးအိုးဆီခကျြပှဲကွီး)
Choice of chicken, fish ball, pork, pork rib, seafood & prawn
Kyay Oh (Regular) (ကြေးအိုးပွဲကြီး) (ကွေးအိုးပှဲကွီး)
Choice of chicken, fish ball, pork, pork rib
Fried Wonton with Prawns (Large) (ဖကျထုပျကွျော‌ ပုဇှနျ)(ပှဲကွီး)
Cook@Home Pork Kyay Oh (1pax) (Frozen)
Cook@Home Pork Kyay Oh Si Chet (1pax) (Frozen)
Cook@Home Chicken Kyay Oh (1pax) (Frozen)
Cook@Home Chicken Kyay Oh Si Chet (1pax) (Frozen)
Marinated Grilled Pork Frozen -4 stk(ဝက်ကင်)(ဝကျကငျ)
Marinated Grilled Chicken Frozen -2pcs (ကြက်ကင်)(ကွကျကငျ)
Steamed Chicken Frozen (ကြက်ပေါင်း)(ကွကျပေါငျး)
Steamed Pork Frozen (နံရိုးပေါင်း)(နံရိုးပေါငျး)
Pork Ball -1pkt (25pcs) (ဝက်သားလုံး)(ဝကျသားလုံး)
Fish Cake Ball -1pkt (25pcs) (ငါးဖယ်လုံး)(ငါးဖယျလုံး)
Frozen Chicken Wing -1pkt (4 sticks) (တောင်ပံကင်)(တောငျပံကငျ)
Home Made Kyay Oh Si Chat (HM ကြေးအိုးဆီချက်) (HM ကွေးအိုးဆီခကျြ)
Mixed Meat Kyay Oh (အသားစုံကြေးအိုး)(အသားစုံကွေးအိုး)
Mixed Meat Kyay Oh Si Chat (အသားစုံကွေးအိုးဆီခကျြ) (အသားစုံကြေးအိုးဆီချက်)
Mini Kyay Oh (Chicekn Ball) (မီနီကွေးအိုး) (ကွကျသားလုံး)
Mini Kyay Oh Si Chet (Chicekn Ball) (မီနီကွေးအိုးဆီခကျြ) (ကွကျသားလုံး)
Tom Yum Kyay Oh with Vegetarian (တုနျယမျးကွေးအိုးသတျသတျလှတျ) (တုန်ယမ်းကြေးအိုးသတ်သတ်လွတ်)
Mala Kyay Oh with Vegetarian (မာလာကွေးအိုးသတျသတျလှတျ) (မာလာကြေးအိုးသတ်သတ်လွတ်)
Mala Kyay Oh Si Chat with Vegetarian (မာလာကွေးအိုးဆီခကျြသတျသတျလှတျ) (မာလာကြေးအိုးဆီချက်သတ်သတ်လွတ်)
Si Chet with Vegetable (သတျသတျလှတျဆီခကျြ) (သတ်သတ်လွတ်ဆီချက်)
Si Chet with Pork with Wonton (၀ကျသားဆီခကျြ)(ဖကျထုပျ)(၀က်သားဆီချက်)(ဖက်ထုပ်)
Steamed Chicken Noodle Soup (ကွကျပေါငျးခေါကျဆှဲအရညျ) (ကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲအရည်)
Steamed Pork Ribs Noodle Soup (နံရိုးပေါငျးခေါကျဆှဲအရညျ) (နံရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲအရည်)
Extra Pork Ball Meat (ဝကျသားလုံးအပို) (ဝက်သားလုံးအပို)
Spicy Si Chet with Vegetarian
Extra Pork (ဝကျသားအပို)
Extra Fish Cake Ball (ငါးဖယျလုံးအပို)
Si Chet with Chicken Ball (ရိုးရိုးဆီခကျြ ကွကျသားလုံး)
Si Chet with Pork Ball (ရိုးရိုးဆီခကျြ ဝကျသားလုံး)
Grilled Pork Neck (၀က်ဂုတ်သားကင်) (ဝကျဂုတျသားကငျ)
Meal Box 19- Garlic Fried Rice + Prawn Basil + Fried White Mustard (ကွကျသှနျဖွူထမငျးဖွူကွျော+ ပုဇှနျပငျစိမျး + မုနျညငျးဖွူကွျော)(ကြက်သွန်ဖြူထမင်းဖြူကြော်+ ပုဇွန်ပင်စိမ်း + မုန်ညင်းဖြူကြော်)
Meal Box 20-Rice + Hot & Sour Prawn + Fried White Mustard (ထမငျးဖွူ + ပုဇှနျခဉျြစပျ + မုနျညငျးဖွူကွျော)(ထမင်းဖြူ + ပုဇွန်ချဉ်စပ် + မုန်ညင်းဖြူကြော်)
Meal Box 21- Rice + Prawn Kong Bao + Tom Yum Soup(ထမငျးဖွူ + ပုဇှနျကုနျးဘောငျ + တုနျယမျးဟငျးခြို )(ထမင်းဖြူ + ပုဇွန်ကုန်းဘောင် + တုန်ယမ်းဟင်းချို )
Grilled Pork -4pcs (၀က်သားကင်) (ဝကျသားကငျ)
Pork BBQ -4pcs (၀က်သား BBQ) (ဝကျသား BBQ)
Grilled Chicken -1pc (ကြက်ကင်) (ကွကျကငျ)
Chicken BBQ -1pc(ကြက်သား BBQ) (ကွကျသား BBQ)
Grilled Chicken Wings -4pcs (ကြက်တောင်ပံကင်) (ကွကျတောငျပံကငျ)
Grilled Mutton -4pcs(ဆိတ်သားကင်) (ဆိတျသားကငျ)
Mutton BBQ -4pcs (ဆိတ်သား BBQ) (ဆိတျသား BBQ)
Grilled Chicken Sibu -3pcs (ကြက်ဆီဗူးကင်) (ကွကျဆီဗူးကငျ)
Grilled Vegetable -3 sticks (အသီးကင်) (အသီးကငျ)
Grilled Garlic (ကွကျသှနျဖွူကငျ) (ကြက်သွန်ဖြူကင်)
Grilled Lady Finger (ရုံးပတသေီးကငျ) (ရုံးပတေသီးကင်)
Grilled Bread (ပေါငျမုနျ့ကငျ) (ပေါင်မုန့်ကင်)
French Fries (အာလူးချောင်းကြော်)(အာလူးခြောငျးကွျော)
Grilled Pork Balls (ဝကျသားလုံးကငျ)
Grilled Chicken Balls (ကွကျသားလုံးကငျ)
Grilled Fish Cake (ငါးဖယျလုံးကငျ)
Wanton Soup (ဖကျထုပျပွုတျ) (ဖက်ထုပ်ပြုတ်)
Fried Wonton with Prawns (Small) (ဖကျထုပျကွျော‌ ပုဇှနျ)(ပှဲသေး)
Pork Rib Soup (၀ကျနံရိုးစှပျပွုတျ) (၀က်နံရိုးစွပ်ပြုတ်)
Fish Cake Ball Soup (ငါးဖယျလုံးစှပျပွုတျ) (ငါးဖယ်လုံးစွပ်ပြုတ်)
Noodle Soup with Vegetable (သကျသတျလှတျခေါကျဆှဲပွုတျ) (သက်သတ်လွတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Vermicelli Soup with Vegetable (သကျသတျလှတျကွာဇံပွုတျ) (သက်သတ်လွတ်ကြာဇံပြုတ်)
Steamed Chicken Soup (ကွကျပေါငျးစှပျ)(ကြက်ပေါင်းစွပ်)
Chicken Noodle Soup (ကွကျသားခေါကျဆှဲပွုတျ)(ကြက်သားခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Grapefruit Juice (ဂရိတျဖရုသီးဖြျောရညျ) (ဂရိတ်ဖရုသီးဖျော်ရည်)
Apple Juice (ပနျးသီးဖြျောရညျ) (ပန်းသီးဖျော်ရည်)
Mixed Fruit Juice (သီးစုံဖြျောရညျ) (သီးစုံဖျော်ရည်)
Honey Lemon Juice (ပျားသံပုရာ)(ပြားသံပုရာ)
Strawberry Yogurt (စတျောဘယျရီဒိနျခြဥျ) (စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်)
Mixed Fruit Yogurt (သီးစုံဒိနျခြဥျ) (သီးစုံဒိန်ချဉ်)